Halista dagaal ka dhex qarxa dunida oo aad u sarreysa (Warbixinta Sirdoonka USA) – Kasmo Newspaper
Updated - February 14, 2018 1:09 pm GMT
London (Kasmo), ‘Halista dagaallo ka qarxa Dunida, oo ay ku jiraan kuwa quwadaha waaweyn, waligeed sidaan oo kale uma gaarin heer sare, dagaalkii qaboobaa ka dib’.
Waa qayladhaanta, Agaasimaha DNI (Director of National Intelligence) Dan Coats, dhex dhigay Congress-ka Maraykanka, isaga oo sheegay in China iyo Russia, si daandaansi leh u sii ballaarinayaan aaggooda qalqaalada (Influence).
Warbixinta oo soo baxday 13kii Febrayo, Coats wuxuu ku caddeeyay in baratanka Dawladuhu sii kordhi doono sannadada soo socda, isaga oo tilmaamay Kuuriyada Woqooyi iyo colaadda ka dhexaysa Sacuudiga iyo Iiraan in ay yihiin halisaha ugu weyn Dunida maanta.
Mas’uulka oo hadal ka jeedinaya Congress-ka isaga oo ka hadlaya isbeddellada siyaasadeed ee ka socda Yurub wuxuu ka digay ‘in Midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah ku adkaan doonto sidii ay meel uga soo jeedsan lahaayeen taxaddiyada faraha badan ee la xiriira nabadgalyada, taasina waxay daciifinaysaa dunida Galbeedka’.
Sidaas ayuu u dhigay markii uu ka hadlayay culayska Yurub ka haysta sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka sida muhaajiriinta, xasilloonidarrada daafaha, halista argagixisada iyo faragalinta Russia ee doorashooyinka.
Coats oo ah isuduwaha Hay’adaha Sirdoonka iyo la-taliyaha Madaxweynaha dhinaca nabadgalyada warbixintiisa wuxuu ku qoray in Moskow faragalin lixaad leh ku hayso ololayaasha doorasho ee reer Galbeedka iyada oo doorashooyin ka dhici doonaan 2018ka Yurub iyo Amerika.
Sirdoonka Russia wuxuu sii wadi doonaa faafinta wararka beenta ah, I loo dhiirrigaliyo mowqifyo siyaasadeed oo Anti-American ah, si loo daciifiyo xiriirka USA iyo Yurub. Iyo waliba si loo curyaamiyo cunaqabatayntii lagu hayay Moskow, loogana hortago in dalalkii ex-Soviet ku soo biiraan Midowga Yurub.